Soo degso xirmada Antonov 72-74 FSX & P3D - Rikoooo
Model by Dimitri Samborski, VC xoojinaya Michael Pook, repaints by Stephen Browning
An addon taasi kama dhigeyso inay tahay mid garaaf ahaan tayo ahaan aad uxun, laakiin ugu yaraan waa dhif iyo naadir in qalabaynta, gaar ahaan inay dhameystiran tahay (dhawaaqyada caadada ah, 2D gudeedka, isugeyn wareega). Waxaa ku jira 4 dib-u-celin.
Asal ahaan loogu tala galay in lagu badalo Antonov An-26, cilmiga ku saabsan horumarinta ah ee An 72 bilaabay in 1970s ah Laba prototypes la dhisay. Midkii kowaad wuxuu u horeysay duulay on December 22 1977. diyaarad labaad waxa la keenay Paris Air Show 1979.
In November iyo December 1983, saddex duuliye Soviet operative Wehel la aasaasay 17 diiwaanka cusub oo rasmi ah oo duurka ku ah xawaaraha toosan leh load on board ah An-72.
Dabayaaqadii 1995, in ka badan 160 An-72 iyo An-74 la soo samatabbixiyey, ciidamada ugu badan. (Wikipedia)
Author: Model by Dimitri Samborski, xoojiyay VC by Michael Pook, ixtiraamo by Stephen Browning